Guddoomiyihii dagaalka looga saaray Degmada Diinsoor oo isku soo dhiibay Koonfur Galbeed | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Guddoomiyihii dagaalka looga saaray Degmada Diinsoor oo isku soo dhiibay Koonfur Galbeed
Guddoomiyihii dagaalka looga saaray Degmada Diinsoor oo isku soo dhiibay Koonfur Galbeed
Diinsoor (Halqaran.com) – Gudoomiyihii hore ee Degmada Diinsow, Ibraahim Maxamed Nuur (Shigshigow) ayaa waxaa uu isku soo dhiibay Maamulka Koonfur Galbeed, ka dib markii Isniintii dagaal looga saaray degmadaasi.
Gudoomiyihii hore ee Degmada Diinsoor ayaa dhawaan ka horyimid xil ka qaadis uu ku sameeyay Wasiirka Arrimaha Gudaha & Dowladaha Hoose ee Koonfur Galbeed, Maxamed Abuukar Cabdi.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed ayaa 11-kii bishan wareegto uu soo saaray xilka uga qaaday Gudoomiyihii hore ee Degmada Diinsoor, isagoona Cabdisalaan Xaaji Siidow u soo magacaabay inuu noqdo Gudoomiyaha cusub ee Degmada Diinsoor.
Diidmadiisa oo maalmihii la soo dhaafayba ka taagneyd Degmada Diinsoor ayaa keentay inay shalay weerar ku qaadaan Ciidamada Maamulka Koonfur Galbeed oo garab ka helaya Ciidanka Amisom, iyadoona magaalada dhinac looga saaray.
Gudoomiye Shigshigow ayaa saqdii dhexe ee xalay isu soo dhiibay Wasiiro Maamulka Koonfur Galbeed ka tirsan oo ku sugan Degmada Diinsoor, ka dib markii labada dhinac waan-waan laga dhex bilaabay.
Wasiirada Koonfur Galbeed ayaa waxay Shigshigow la yeesheen kulan albaabada u xiran, kaasoo aanay jirin cid weli faah faahin ka bixisay waxa ka soo baxay, balse ilo wareedyo ayaa sheegay in Shigshigow uu aqbalay in uu u hoggaansamo awaamiirta Madaxtooyada Koonfur Galbeed.
Wararka ka imaanaya Degmada Diinsoor ayaa sheegaya dagaalkii shalay ka dhacay degmadaasi in ay ku dhinteen dad ku dhow toban qof, kuwaa oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayid ah.
Gudoomiyihii hore ee Degmada Diinsow